Wasiir warancade Oo Ka Hadlay Habacsanaan Laga Dareemay Tabaabushaha Xuska 18-ka May |
Wasiir warancade Oo Ka Hadlay Habacsanaan Laga Dareemay Tabaabushaha Xuska 18-ka May
Hargeysa(GNN)-Wasiirka Wasaaradda Arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancadde, ayaa si kooban uga hadlay hanaanka u diyaar garowga maalinta qaran ee Xuska 18-ka May oo laga dareemay in habacsanaani ka muuqato, waxaanu sheegay inay si dardar leh u socoto.
Maalinta 18-ka May ee ah 24 guuradii ka soo wareegtay markii Somaliland gooni uga goday Somalia inteeda kale oo bulshada Somaliland dal iyo dibadba si weyn uga xusaan ayaan sanadkan dalka gudihiisa aad looga dareemin tabaabushaha Bulshada.
Shacbiga Somaliland ayaa looga bartay inay horraanta Bisha May si iskood ah Calanka Somaliland ugu qurxiyaan Meheradahooda, iyagoo Calanka ka taaga Meelo badan, islamarkaana Suuqu ku cammirmo kala Iibsiga Calanka Somaliland, balse Sanadkan wali si muuqata loogama dareemin arrintan.
Wasiirka Arrimaha dibadda oo Saxaafaddu wax ka waydiiyay arrintan ayaa si kooban u sheegay inaanay sidii hore waxba kaga bedelnay islamarkaana diyaar garowgu si weyn u socdo “Maansha Allah, si weyn ayaa loo wadaa oo boqolkiiba boqol ah, cirkaas bay maraysaa. Hadda ayaaban soo dhaafay oo waxaa la rinjiyaynayay Laamidii” ayuu yidhi Wasiir Cali Warancadde.
Bulshada Somaliland oo wakhtiyada 18-ka May laga dareemi jiray wada jir iyo midnimo ayaa haatan ku foogan arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan, gaar ahaana Muddo kordhinta murankeedu wakhtigan taagan yahay oo si weyn loo dhawrayo wakhtiga la kordhin doono.